Ngaba ungandibonisa indlela yokuphumelela kwi-Amazon usebenzisa idatha yokukhangela yam ukhuphiswano?
Ewe, lo ngumbuzo ofanelekileyo. Ndiyathetha ukuba xa kusetshenziswe ngokufanelekileyo, idatha ye-Amazon yokufuna i-niche okanye iqela elisondeleyo inokuba yinkqubo yakho eqondekileyo yokuphumelela kwezoshishino apho. Kwaye ndikholelwa ukuba into ephambili kwiziphumo zakho zokuthengisa eziphezulu zihlala zifunyanwa ngokukodwa kwizinto ezikhethiweyo ezikhethiweyo ezisetyenziswe ngabathengi abaphilayo, ezidibaniswe nezicwangciso eziqingqiweyo zexabiso kunye nezimo. Le nto yinto yokuba umsebenzi ophela unokuba ngumqengqwana wekhekhe - konke okufunekayo kukufumana isisombululo esifanelekileyo sokuqhuba uphando olukhuphiswano olufanelekileyo kwaye ekugqibeleni ube yimpumelelo eMazambique nje usebenzisa idatha yosesho yabaqhubi bakho. Ngoko, ekuqwalaseleni ukuba le nto inzima kunoko ukufumana isisombululo esifanelekileyo phakathi kwale nani lininzi elinikezelweyo kwi-Intanethi. Yingakho ngaphantsi ndiza kukubonisa izixhobo zesoftware ezibonakalayo zilungele ukwenza izinto zibe lula - zombini ukuphanda ngegama elingundoqo, indlela engcono yokufumana ithuba lokukhawulela, kunye nezisombululo ezizenzekelayo zokukhokela kwi-niche yakho okanye candelo lomkhiqizo.
Hamba ngomzila ochanekileyo ukususela ekuqaleni
Makhe ndiqale ngamathuba okulindela e-Amazon ngedatha yokukhangela malunga nemveliso ekhoyo kakhulu ekhoyo ngoku, iindidi ezithandwa kakhulu kunye neentetho ezishisayo kakhulu ezikhoyo kwimarike. Yilapho ithuluzi likaJungleScout liza kudlala! Le software iyaziwa njengona khetho olufanelekileyo ekuqhutyweni kophando oludityaniswe nedatha olufunekayo ekufuneni amathuba athengisayo kumthengisi e-Amazon, ekufumaneni into efanelekileyo kakhulu ekuthengeni ukuba ifakwe kwizinto ezikhoyo ezikhoyo. Ingakumbi - ungayiphendula ngokulula loo msebenzi unzima kakhulu ukulandelela amanqaku asemqoka abaphikisi bakho abaphumeleleyo kwimigaqo elula kwaye elula esebenza ngendlela ecwangcisiweyo.
Gcina iiNkqubo eziPhambili zokuSebenza ngokuPhezulu kunye neNgcaciso yegama elingundoqo
Uluhlu lwesinye isixhobo esihlakaniphile ukuba ufumane umfanekiso omkhulu we-Amazon, idatha esebenzayo kwiimpawu eziphambili eziphakanyisiweyo okwangoku ezicetyiswayo kuluhlu lwakho, kunye kunye nokuqonda okubaluleke kakhulu apha malunga neenkcukacha eziphambili kunye nemigca yokukhangela imilenze yakho iindawo ezichasene nazo. Ingakumbi - ndifumene uMmandla womelele ngakumbi xa kuziwa kuphuhliso lwephulo lePPC ukwenzela ukuba usebenze kakuhle. Emva koko, esi sixhobo sandincede kakhulu ngokulawulwa kwengozi, ngenxa yokuqikelela kwindleko enokuthenjelwayo kunye neenkcukacha ezichanekileyo zengxowanoliso yam, iindleko zenyanga, ukuthengiswa kwexabiso, i-post-FBA net income, njl.
Uzuze kwiSicwangciso esiPhakamileyo seNtengo kunye neKharityhulamu yokuCwangcisa
Into ekugqibeleni endifuna ukuyibonisa namhlanje nguKeepa. Ithuluzi elilandelekayo lokulandelela ixabiso lama-Amazon elilula. Isicatshulwa esicocekileyo nesicacileyo sichaze ngokucacileyo. Nangona kunjalo, ndivumele ukuluhlu lwezinto eziphambili ezithembiswa yi-Keepa software software - ubuncinane ngenxa yokuphelela. Phakathi kwamanye, eli lixabiso lomthengisi lingakunceda ngemagrafu yeembali ezibandakanyekayo kwindlela ephathekayo ngokufanelekileyo, izilumkiso zexesha langempela kwixabiso lokunyuka / ukuphakama nokuguqulwa kwezinto ezikhoyo, ukujonga okulula kufumaneka ngokuthe ngqo ngokukhawuleza kwesibrowser, kunye umsebenzi wokujonga ngokukhawuleza, ukubona ama-intanethi amava apha kwi-Amazon kwaye uthelekisa amaxabiso angaphantsi kwexesha Source .